N'ogbe 4.5mm na-abụghị mkpọtụ pịa vinyl flooring Spc-2 Onye na-emepụta ihe na onye na-ebubata ya. Moyo
4.5mm na-enweghị mmịfe pịa vinyl ...
Laminate Ft N'ihi N'ogbe ...
laminate n'ala maka parquet ...
Ecomomic laminate n'ala EIR ...
4.5mm na-enweghị mmịpụta pịa vinyl flooring Spc-2
Ala ụlọ vinyl siri ike, nke a makwaara dị ka ụlọ SPC, bụ nhọrọ vinyl vinyl na -enweghị mmiri na ahịa. Ị mara ka vinyl siri nwee aha na -agbanwe agbanwe ma na -erughi eru ...
Ala ụlọ vinyl siri ike, nke a makwaara dị ka ụlọ SPC, bụ nhọrọ vinyl vinyl na -enweghị mmiri na ahịa.
Ị maara ka vinyl nwere aha ọma maka mgbanwe na adịghị ike karịa osisi ọdịnala ma ọ bụ laminate? Ọ dị mma, WPC vinyl siri ike siri ike, mana ala SPC siri ike isi vinyl dị ka iguzo n'elu ihe.
Obere ụlọ a dị larịị nwere ike ịdị ka ọ nweghị ihe ọ pụtara, mana ọ bụ nke kachasị sie ike, nke emebere nke ọma iji guzogide ojiji na mmegbu nke gburugburu azụmahịa.
Dị ka WPC, SPC isiike vinyl flooring bụ akara ahịrị maka ọ bụghị naanị arụmọrụ kamakwa ọ dịkwa mma. N'iji vinyl isi siri ike, ị ga-ahụ ụdị osisi na ụdị okwute kacha ewu ewu na ụcha na taịlị mara mma, na-ekwenye ekwenye.
Ala ụlọ vinyl SPC siri ike nke nwere okomoko na -enwekarị ọkwa 4.*
Nwere ike ịdị iche n'etiti ndị nrụpụta.
Akwado azụ: Nke a bụ ọkpụkpụ azụ gị.
SPC Core: Nke a bụ ihe kacha adọrọ mmasị! Ala ụlọ SPC nwere isi WPC siri ike, nke anaghị egbochi mmiri. Ọ gaghị adọka, zaa ma ọ bụ bee n'agbanyeghị mmiri mmiri ọ bụla ị debere ya. Isi a dị oke oke na-enweghị ndị ọrụ ụfụfụ dịka ị ga-ahụ n'ala ụlọ WPC ọdịnala. Ọ na -enye gị obere nkwụsi ike n'okpuru ụkwụ, mana ọ na -eme ka ala ala bụrụ nnukwu dike na ngalaba ịdịte aka.
Mbipụta Vinyl Layer: Nke a bụ ebe ị ga -enweta ọmarịcha foto gị nke na -eme ka vinyl dị ka (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ) ya na ihe okike dị ka okwute na osisi. Ọtụtụ mgbe, ụlọ vinyl okomoko siri ike bụ vinyl kacha mma n'ahịa. Nke a pụtara na ị ga -enweta ọmarịcha anya ndị mmadụ ga -a swearụ iyi bụ ezigbo osisi/okwute!
Wear Layer: Dị ka ọ dị na vinyl ọdịnala, akwa eyi dị ka onye nche gị; ọ na -enyere aka ichebe ala gị site na mgbịrịgba, ọkọ, wdg. Ka akwa mkpuchi ahụ siri ike, ọ na -echekwa nchekwa gị. Amara ala ụlọ SPC maka ịnwe ntụpọ, akwa mkpuchi anụ na -enye nchebe karịa. Mgbe ị na -ele vinyl flooring, ọ dị ka (ma ọ bụrụ na ọ bụghị karịa) dị mkpa ileba akwa oyi akwa dị ka ọkpụrụkpụ plank.
Ngwaahịa SPC Pịa Ntọala
Ọkpụrụkpụ 3.5mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0mm, ahaziri
Onye na -eyi ihe 0.1/0.15/0.3/0.5/0.7MM
Ịgba ụgwọ EVA/IXPE 1.0/1.5MM/2.0MM
Nha: 7 "*48 '', 6"*36 '', 9 ''*60 '', 12*12*12*24,24*24, ahaziri
Ụdị Mkpụrụ osisi/ọka marble/ọka kapeeti
N'elu Embossor Light, Embossor miri emi, Ọcha aka, Plain, Mmetụta.
Akwụkwọ ikike Residential 20Years, Commercial Afọ 15
Usoro mkpọchi Pịa
Agba Karịrị 3 hundrends .pls jụọ anyị ma ịchọrọ ịhụ karịa.
Nke gara aga: 4mm waterprooof spc flooring emeputa
Osote: 5.0mm firereatardant pịa flooring ụlọ ọrụ
ala laminate maka agba parquet
Laminate Floor Maka N'ogbe na usoro nkịtị
5.0mm firereatardant pịa flooring ụlọ ọrụ
Ihe nrapado onwe onye
PVC Vinyl Floor Cutter machine